Window Screen Mesh abaNikezeli kunye neFektri- China iiwindows Wind Mesh abavelisi
Isikrini se-1.Metal wire sibandakanya isikrini sedayimane ye-mesh kunye nescreen sefestile yeewindows. Isikrini esineemitha zokuhanjiswa kwemitha senziwe sivela kwi-wire profiles enika zombini iikhabhathi zanamhlanje nezendabuko ukubhengeza okumangalisayo.Umyalezo otyhidiweyo ocekeceke wentsimbi enomtsalane uyilo oluhle. Oku kuvumela ukuba zisetyenziswe ngokubanzi kuyilo lwezinto zangaphakathi, ii-facade zokwakha kunye neemveliso ezahlukeneyo zemveliso. Isikrini sewindows yedayimani inezigqibo eziphezulu, ukumelana nokugqwala, amandla aphezulu, ukukhuselwa okuhle, ...
Isikrini Esiphezulu-Inkcazo yewindows
Isikrini esinegama eliphezulu lokucacisa imveliso entsha eyenzelwe zonke iintlobo zeemveliso zovavanyo lwewindows, esombulula ngokufanelekileyo ukungahambelani kwezixhobo zemvelaphi yesikrini esineemitha. Ayizukuthintela ukubonwa kwaye igcinwe isiphumo esihle sokungena komoya. Isikrini esineengcaciso eziphakamileyo sinokuthintela ngokufanelekileyo iingcongconi ukuba zingangeni egumbini, ukudala indawo yokuhlala elungileyo kuye wonke umntu. Isikrini esineenkcukacha eziphakamileyo sinamandla aphezulu aphezulu kunye nokuqina, kwaye siyakwazi ukuthwala ...
Izikrini zeAnti-haze iwindow ayijonganga kwahlukile kwizikrini eziqhelekileyo zefestile. Kodwa ngokungafaniyo nezikrini eziqhelekileyo, lo mngxunya wefilim uzele yimingxunya engabonakali ngamehlo. imingxunya.Ipores zomzimba ezijikelezayo zivumela iimolekyuli zodlula kuphela, ngoko amasuntswana amahle anjenge-PM2.5 anokuthintelwa yifilimu ecekeceke ngaphandle kokuchaphazela ukuhamba kwamacandelo ezinto ezinjenge-carbon dioxide. Imveliso ...
Isikhuselo se Window Window
1. Inkqubo yokuveliswa kwescreen sefestile yewindows ibandakanya ukuzoba, ukurhawula, ukuluka, ukubumba, ukuqengqa, ukujonga kunye nokupakisha isilika ye-polyester. Isikhuselo sewindows pollen Material Polyester Width 1.2m, 1.4m Length 5m-30m Grammage 90 g / sq inombolo 18 * 48 Umbala Mnyama, Mhlophe, Ufakelwe iipakeji ezifakwe kwiingxowa ezilukiweyo ezibhokisini Iimpawu zesivalo semipu yokulwa nefestile (1) Anti impova, ukusonga rhoqo, ukungangenisi manzi, anti ...